Wipster: Video Review na Ihu nyiwe | Martech Zone
Anyị na ndị enyi anyị arụrụla ọrụ na 12 Kpakpando Media (ndị ogologo oge na ndị enyi!) Na vidiyo onye ahịa. Ọ bụ ọkaibe video, metụtara intros, outros, b-mpịakọta, ahịa footage, na ajụjụ ọnụ niile fụchie na nanị ihe karịrị 2 nkeji.
Ha zipụrụ njikọ ebe anyị nwere ike ịnweta vidiyo site na Anya, nyocha vidiyo na ikpo okwu. Ọ bụ interface dị omimi ebe onye ọ bụla na-ekiri agba nwere agba ma nwee ike ịza ajụjụ na ọnọdụ ọ bụla n'oge ọ bụla na usoro iheomume. The interface na-agụnye a ikpuru na dobe interface ka intuitively bulite ma jikwaa gị videos.
Ikpo okwu nwere ndepụta ime ebe a na-etinye ihe na-akpaghị aka n'ime ọrụ ma nwee ike nyochaa ya. I nwekwara ike ibudata PDF ma obu bipute otu ha, ma obu denye aha na ntinye ihe. Ikpo okwu a na - enyekwa gi ohere ikep ta ihe nchekwa ya na ndi oru a kwadoro ka ha belata ohere n’etiti ndi ahia ma obu ndi akpopuru maka nzaghachi
Nyochaa ma kwado site na Adobe Premiere Pro
The Wipster Review Panel maka Adobe Premiere na-enye gị ohere izipu ndị ahịa gị ndezi maka nzaghachi na-ahapụghị ụlọ ndezi gị, ebe Wipster na-atụgharị, bulite, kesaa ma mechie nzaghachi n'azụ ọnọdụ. Ndị na-arụkọ ọrụ ọnụ nwere ike ịlele ka ihe ndị a na-ekwu na-egosi na akpaghị aka dị ka ihe nrịbama na oge Adobe Premiere Pro.
Nyochaa ma kwado site na ekwentị
Ọ bụrụ na nke ahụ adịghị mfe, Wipster kachasị maka mkpanaka ka ị nwee ike inyocha, kwue ma kwado vidiyo na njem, jiri ngwaọrụ ọ bụla.
Ricnye ọnụahịa dị oke mfe - naanị $ 15 kwa onye ọrụ kwa ọnwa. Ọ na-ewe sekọnd ole na ole iji bido.
Debanye maka ụbọchị 14 n'efu na Wipster
Tags: Adobe PremierAdobe premiereadobe premiere provideo ihu ọma usorovideo mmekotaihe vidiyo kwurunyochaa vidiyoonye nchacha